नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मुछिए घुसका'ण्डमा, छानीछानी पूर्वमाओवादी नेता सिध्याइने खेल ! -
नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मुछिए घुसका’ण्डमा, छानीछानी पूर्वमाओवादी नेता सिध्याइने खेल !
प्रकाशित मिति : २६ पुष २०७६, शनिबार ००:०९
काठमाडौं । बी एन्डी सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीमाथि गम्भी’र आ’रोप लगाए । गिरीले आफूसँग बत्तीसपुतलीस्थित द्वारिकाज होटलमा आफ्नो मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि २० करोड घुस मागेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताए । त्यसैदिन गिरीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाईलाई घु’स रकम मागेको प्रमाण दिन चुनौ’ती दिए ।
यो त भयो सतहमा आएको घट’ना । तर, यो घटना नेकपाभित्र भुसको आगोझैं फैलिँदै जाने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन, यो घुसकाण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मन्त्री पद धरा’पमा मात्र पारेको छैन, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको छविमा समेत दा’ग लागेको छ ।
मन्त्री पोखरेल श्रेष्ठ निकट नेता हुन् । उनी तत्कालीन एकता केन्द्र माओवादीमा विलय हुँदा श्रेष्ठसँगै गएका थिए । श्रेष्ठकै सिफारिसका आधारमा पोखरेल पटक–पटक मन्त्री बन्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष गिरी मन्त्री पोखरेलकै प्रयासमा सो ठाउँमा पुगेका हुन् । गिरीले आफूसँग २० करोड मागेको र त्यसबाट मन्त्री पोखरेल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पनि दिनुपर्ने प्रसाईले तथ्य बाहिर ल्याएपछि नेकपामा हलचल ल्याएको छ ।
खासगरी प्रवक्ता श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनलाई प्रतिनिधिसभामा हारे पनि राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउन लागिएको छ । अब उनी चाँडै मन्त्री पनि बन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा घुसकाण्ड सार्वजनिक हुनुले उनी बाहिर बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मेडिकल सञ्चालक प्रसाईले आरो’प लगाएकै दिन श्रेष्ठले ट्विटमार्फत खण्डनको प्रयास गरेका थिए।
जसमा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजमा शोषक, लुटेरा, भ्रष्ट, ठग, फटाहा र अ परा धीहरू छन् र त्यस्ता तत्व एवं प्रवृत्तिबाट समाजलाई मुक्त गर्न नै हामी राजनीतिमा सक्रिय हुनुपरेको हो । हामी राजनीतिलाई समेत सफा गर्दै समाजलाई सभ्य, स्वच्छ र समृद्ध बनाउन संघर्षरत छौँ र रहनेछौँ । कुनै षड्य’न्त्रले हामीलाई विचलित बनाउने छैन ।’
आफूमाथि घुस मागेको आ’रोप लगाउने प्रसाईलाई श्रेष्ठले शोषक, फ’टाहा र अ प राधी को संज्ञा दिएका छन् । प्रसाई र गिरीबीचको घुसकाण्डबारे अहिलेसम्म नेकपाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नारायणकाजी श्रेष्ठ कै मुख्य भूमिकामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो ।